Bayern Munich oo kula dagaalameysa Manchester United daafaca midig ee Norwich City
Home Horyaalka Germalka Bayern Munich oo kula dagaalameysa Manchester United daafaca midig ee Norwich City
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Bayern Munich ayaa xagaaga u dhaqaaqeysa saxiixa daafaca midig ee kooxda Norwich City Max Aarons. Bartilmaameedka Bayern Munich ayaa ahaa nin muhiim u ah kooxda Canaries xilli ciyaareedkan, isagoo ka caawiyay inay kor u soo kacaan horyaalnimada Horyaalka Ingariiska.
ESPN ayaa ku warameysa in Manchester United ay sidoo kale miisaameyso u dhaqaaqista daafaca dambeedka midig madaama Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo inuu tartan cusub siiyo Aaron.
Red Devils ayaa hadafkeedu yahay inay dib u soo ceshadaan guushii ay ka gaareen saxiixa Alex Telles oo ay kula tartamayeen Luke Shaw.
Haddii ay Manchester United u dhaqaaqdo doonista xidigan, waxa ay loolan adag kala kulmi doontaa kooxda culus ee Bundesliga ee Bayern Munich, kuwaas oo doonaya inay horumariyaan kooxdooda xagaaga.
Previous articleArsene Wenger oo sharraxay sababta ay Liverpool u dhibtooneyso
Next articleSupercomputer oo Saadaaliyay Kooxda ku guuleysan karta Horyaalka Premier League